Ugu yaraan 19 maleeshiyo ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray Al-Shabaab iyo dagaalyahano daacad u ah Mukhtaar Roobow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 19 maleeshiyo ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray Al-Shabaab iyo dagaalyahano daacad u ah Mukhtaar Roobow
August 10, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ugu yaraan 19 maleeshiyo ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray Al-Shabaab iyo dagaalyahano daacad u ah Mukhtaar Roobow. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 19 maleeshiyo ah ayaa lagu dilay dagaal maalin socday oo ka dhacay gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dagaalka ayaa dhacay shalay oo Arbaco ahayd waxaana uu dhexmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo dagaalyahano taageersan hoggaamiyhii hore ee Al-Shabaab Mukhtaar Roobow sidoo kale loo yaqaab (Abu Mansuur).
Al-Shabaab ayaa subaxnimadii hore Atbacadii weerar ku qaaday dagaalyahanada Abu Mansuur, taasoo ku khasabtay in dagaalyahanada Roobow laga kiciyo tuulada Abaal, balse gelinkii dambe ayay dib u soo rogaal celiyeen oo ay Al-Shabaab dib u riixeen, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Ilo-wareedyo katirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in 13 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab iyo lix kale oo katirsan dagaalyahanada Abu Mansuur ay ku dhinteen dagaalka.
December 17, 2016 Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Somaliland oo la hakiyay